कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: जिन्दगीका छालहरू— उपन्यास
जिन्दगीका छालहरू— उपन्यास
(अनलाईनमा पढ्न चाहने विदेशमा रहनु भएका मेरा पाठकहरुको लागि क्रमशः प्रकाशत गर्दै लैजाने छु ।)
असार महिनाको तेस्रो साता । झमझम पानी परिरहेको थियो । किसानहरू रोपाईंको लागि खेततिर लागिरहेका थिए । यो साल असार महिनाभरिमा पहिलो पटक ठूलो वर्षा भइरहेको थियो । यो साल पर्याप्त मात्रामा वर्षा नभएर कीर्तिपुर क्षेत्रमा धान रोप्नै पाएको थिएन । पहिले कुलोको राम्रो व्यवस्था थियो । कीर्तिपुर क्षेत्रमा सहरीकरणको साथै बाटो फराकिलो बनाउ“दा ती कुलाहरू पुरिएका थिए । कतिपय ठाउ“मा मानिसहरूले अतिक्रमण गरेर घर बनाए । अहिले ‘आकाशको फल आ“खा तरी मर’ भने झै भयो ।
विक्रम काम गर्ने ठाउ“मा गयो । त्यहा“ काम गर्नेहरू कोही पनि भेटेन । उसले काममा लगाउने साहुस“ग कामको बारेमा सोध्यो ।
“आज सबैजना रोपाईं गर्न गए । अब रोपाईं नसकेसम्म काम बन्द हुन्छ ।” साहुले भन्यो ।
विक्रम घरमा आयो । उसको घरपतिस“ग एउटा दैनिक पत्रिका लिएर आफ्नो कोठामा गयो । पत्रिका पढ्दै जा“दा उसको आ“खा एउटा वर्गीकृत विज्ञापनमा प¥यो । त्यो विज्ञापनमा आवश्यकता भत्रे कोलम हे¥यो । त्यसमा लेखिएको थियो “एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित विभित्र सामानहरू बेच्न केही सेल्सम्यान÷सेल्सगल्र्सहरू चाहिएको छ । शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी वा सो सरह पास भएको हुनुपर्ने छ । पारिश्रमिक आपसी समझदारीमा तय गरिने छ ।”
उसलाई यो कम्पनीप्रति अलि विश्वास लाग्यो । योभन्दा पहिले पनि उसले यस्तै विज्ञापन हेरेर चार पा“च ठाउ“मा निवेदन दिएर अन्तर्वार्ता पनि दिइसकेको थियो । तर कहीं पनि उसको नाम निस्केन । ती कम्पनीहरूमा मासिक तलव नै पन्ध्र हजारदेखि बीस हजारसम्म तोकिएको हुन्थ्यो । एसएलसी पास गरेको मानिसले शाखा अधिकृतको तलब पाउने भए पछि लोभ लागिहाल्छ । एउटा फाराम भर्न दुई सय रुपैया“ निवेदन दस्तुर, चारवटा रङ्गीन फोटाहरू चाहिन्छ । यसरी एक ठाउ“मा फाराम भर्दा दुई सय पचास रुपैया“ खर्च लाग्छ । यस हिसाबले पा“च ठाउ“मा फाराम भर्दा उसले एक हजार दुई सय पचास रुपैया“ खर्च गरी सकेको थियो । फाराम भरेर दिएको एक हप्तापछि अन्तर्वार्ता लिन्थ्यो । अन्तर्वार्ता लिएको एक हप्तापछि सम्पर्क राख्न भन्थ्यो । जतिसुकै राम्ररी अन्तर्वार्ता दिए पनि सम्पर्क राख्न जा“दा ‘सरी तपाईं पर्नु भएन’ भत्रे जवाफ दिन्थ्यो ।
कहीं पनि जागिर नपाएर उसले कीर्तिपुरमा घर बनाउने ठाउ“मा ज्यामी काम गर्दै आइरहेको थियो । ज्यामी काममा इज्जत छैन, पैसा पनि छैन । तर के गर्ने पेट पाल्नको लागि काम गर्नुप¥यो ।
जे होस् आज काम छैन । त्यहा“ पनि फाराम भरेर हेरू“ भनेर विक्रमले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, नागरिकताको फोटोकपी र चारवटा पासपोर्ट साईजको रङ्गीन फोटो लिएर काठमाडौं गयो । ऊ बसबाट कालिमाटीमा ओर्लियो । उसले कम्पनीको साईनबोर्ड खोज्न थाल्यो । कालीमाटीको एउटा सुपर मार्केट भवनको वीचमा कम्पनीको साईनबोर्ड झुण्ड्याईराखेको देख्यो । त्यो सुपर मार्केटभित्र सोध्दै खोज्दै जा“दा तेश्रो तल्लामा अफिस भेट्टायो । उसले अफिसमा गएर दुई सय रुपैया“ तिरेर एउटा फाराम लियो र फाराम भरेर दियो । त्यहा“ दरखास्त दिन आउनेहरूको भीड थियो । फाराम बुझीलिनेले अर्को हप्ता सोमबार अन्तर्वार्ता दिन आउनु भन्यो ।
उसले फाराम भरेर आएको कुरा घरपति सूर्यमानलाई बतायो । राम्ररी अन्तर्वार्ता दिनु भनेर सूर्यमानले उसलाई शुभकामना दियो ।
अन्तर्वार्ताको दिन पनि विहानैदेखि पानी परिरहेको थियो । कहिले दर्केर, कहिले सिमसिम पानी परिरहेको थियो । कीर्तिपुर क्षेत्रमा आ“खाले भ्याएसम्म खेतमा रोपाईं भइसकेका थिए । समयमै खाना खाएर विक्रम सूर्यमानलाई भेट्न उसको कोठामा गयो ।
“बा, अहिले म अन्तर्वार्ता दिन जान लागेको” उसले भन्यो ।
“हुन्छ, नडराईकन, नहडबडाईकन सोधेका प्रश्नहरूको राम्ररी जवाफ दिएर आउनू ।”
“हवस्” भनेर ऊ बाहिर आयो ।
बाहिर वर्षा भइरहेको थियो । विक्रमस“ग छाता थिएन । ऊ घरको छाना मुनी मुनीबाट बस रोक्ने ठाउ“सम्म गयो । एउटा पनि बस रोकीराखेको थिएन । न माइक्रोबस नै थियो । अफिस समयमा कीर्तिपुरमा बस पाउनै गाह्रो, पहिले त कीर्तिपुर यातायातका ठूलठूला बसहरू चल्थे । एउटा बसले एकचोटिमा सत्तरी अस्सी जनासम्म यात्रुहरू लैजान्थ्यो । अहिले ती बसहरू आधा जति बिक्री भइसकेका छन् । बा“कीरहेका धेरैजसो गाडीहरू स्कूल ट्रिपमा जान्छन् । अरू हाइस गाडीहरू मात्र चलिरहेका छन् । जसमा उभिएर कोचाकोच गरेर जा“दा पनि पच्चीस छब्बीस जनाभन्दा बढी अट्दैनन् । विक्रमले घडी हे¥यो । दश बजिसकेछ । कालीमाटी पुग्न उसको मन हतारियो । कहीं अन्तर्वार्ता छुट्यो भने के गर्ने ? त्यहीबेला एउटा हाइसगाडी आयो । ऊ त्यसैमा झुण्डिएर गयो । कालीमाटीमा ओर्लेर अफिस गयो । अफिस कोठाको बाहिर एकजना मानिस कुर्सीमा बसिरहेको थियो । सायद पाले होला ।
“दाइ, अन्तर्वार्ता सुरु भइसकेको हो ?” उसले पालेस“ग सोध्यो ।
“सुरु भइसक्यो । तपाईंको क्रम संख्या कति हो ?”
“थाहा छैन । अहिले कति नम्बर पुग्यो ?”
“भर्खर सुरु भएको हो । ऊ ...त्यहा“ नोटिस बोर्डमा आफ्नो क्रम संख्या हेर्नुहोस् । पालो आएपछि बोलाउ“छु अनि मात्र यहा“ आउनुहोला । नत्र उतै वेटिंग रुममा बसीरहनु होला ।”
ऊ नोटिस बोर्ड भएको ठाउ“मा गयो । त्यहा“ थुप्रै युवाहरू आ–आफ्नो नाम खोजिरहेका थिए । आफ्नो नाम हेरेर कोही भोलि, कोही पर्सि भनेर फर्कंदै थिए । उसले पनि नोटिस बोर्डमा आफ्नो नाम हे¥यो । उसको नाम पैंतीस नम्बरमा रहेछ । उसको अन्तर्वार्ता आजै हुन्छ । फार्म बुझाएको दर्ता नम्बरलाई नै अन्तर्वार्ताको क्रमसंख्या बनाएको रहेछ । उसले आफ्नो पालो कहिले आउ“छ भनेर समयको हिसाव गर्न लाग्यो । एकजनाको अन्तर्वार्ता लिन पा“च मिनेट मात्र लागे पनि उसको पालो आउन तीन घण्टा लाग्थ्यो । त्यहा“ हुलमुलमा के बस्ने भनेर ऊ त्यो भवनको प्रत्येक कोठा कोठामा घुम्न लाग्यो । प्रत्येक कोठाको सोकेसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित सामानहरूको प्रदर्शनी गरी राखेका थिए । विभित्र देशबाट आयात गरिएका ड्राइफुडका प्याकेटहरू, लिक्विड प्याकेट र कस्मेटिकका थरी–थरिका सामानहरूको थुप्रो देखेर ऊ दंग भयो । यदि यी सामानहरू यही कम्पनीको हो भने यो कम्पनी सक्कली नै हो भत्रे ठान्यो ।
केहीबेर यताउता घुमिसकेपछि ऊ अन्तर्वार्ता भइरहेको कोठाको अगाडि उभिन गयो । अन्तर्वार्ता दिन आएका अरूहरू पनि त्यहा“ बसिरहेका थिए । युवा युवती बराबर संख्यामा थिए । त्यसमध्ये एउटी केटी अरूभन्दा अलग बसिरहेकी थिइन् । विक्रमको आ“खा उनैमा गएर टक्क अडियो । उनले आकाशे रङ्गको साधारण कुर्ता सुरुवाल लगाएकी, घा“टीमा आकाशे रङ्गकै सल बेरेकी, निख्खर कालो बाक्लो कपाललाई एक मुठा बनाएर रवर बैण्डले बा“धी राखेकी थिइन् । गोरो, गोलो अनुहार, चुच्चे नाक, ठूलठूला आ“खा भएकी, उनको उचाइ करीव पा“च फुटकी खुट्टामा साधारण चप्पल लगाइराखेकी थिइन् ।
विक्रमले एकटकले हेरीरहेको ती केटीले पनि चाल पाइहालिन् । उनले पनि उसलाई चोर आ“खाले पुलुक्क पालुक्क हेर्न थालिन् । नारी स्वभाव न हो विक्रमले जस्तो एकटकले हेरिरहन सकिनन् । ती केटीलाई देख्ने बित्तिक्कै उसको मन किन आकर्षित भयो ? उसले त्यसरी हेरेको ती केटीलाई मन पर्छ कि पर्दैन ? मन परेन भने केटीले गाली गर्न सक्छिन्, त्यहा“ हंगामा मच्चाउन सक्छिन् । उसको मनमा डर पैदा भयो र आ“खा अन्तै मोड्यो ।
उसले अन्तर्वार्ता लिइरहेको कोठातिर हे¥यो । अब त्यहा“ त्यति भीड थिएन । ऊ त्यही ढोकातिर गयो । पालेको हातमा एउटा कागज थियो । जसमा अन्तर्वार्ता दिन आउनेहरूको नामावली थियो । अन्तर्वार्ता दिन कोठाभित्र पसेकाको नाममा पालेले टिक मार्क लगाउ“थ्यो । ऊ बाहिर आएपछि अर्को मान्छेको नाम लिएर बोलाउ“थ्यो । त्यो मान्छे आयो भने ढोका खोलेरभित्र पठाउ“छ । त्यो मान्छे आएन भने क्रस चिन्ह लगाउ“छ र अर्को मान्छेलाई बोलाएर भित्र पठाउ“छ । ढोकामा कालो शिशा राखेको थियो । भित्र के भइरहेको छ कसैले थाहा पाउ“दैनथिए । विक्रमले नजिक गएर त्यो कागज हे¥यो । अहिलेसम्म बीस जनाको नाममा टिक मार्क लगाईसकेको रहेछ । जसमा छ जना अनुपस्थित थिए ।
“दाइ, यो क्रस चिन्ह लागेका मानिसहरू अहिले आयो भने फेरि भित्र पठाउनु हुन्छ ?”
“अह“, आफ्नो पालोमा नआउनेहरूलाई पठाईंदैन । हाम्रो मालिक समयको पक्का पावन्दी राख्नुहुन्छ । एक मिनेट ढिला पनि सहनुहुत्र ।”
विक्रम पालेस“ग कुरा गरिरहेको देखेर ती केटी उसको नजिक आइन् । ती केटीले शिष्टतापूर्वक सोधिन्, “दाइ, तपाईं पनि अन्तर्वार्ता दिन आउनु भएको हो ?”
“हो, तपाईं पनि अन्तर्वार्ता दिन आउनु भएको हो ? तपाईंको कति नम्बरमा परेको छ ।”
“मेरो त सैंतीस नम्बरमा परेको छ । तपाईंको कति नम्बरमा परेको छ ?”
“मेरो पैंतीस नम्बरमा परेको छ । तपाईंको नाम के हो ?”
“पार्वती ढकाल । तपाईंको नि ?”
“घर कहा“ हो ?”
“नवलपरासी जिल्लाको बेतहानी गाउ“ । हाल कीर्तिपुरमा कोठा लिएर बसिरहेको छु । तपाईंको घर कहा“ हो नि ? तपाईं पनि काठमाडौंवासी त होइन जस्तो लाग्छ ।”
“हो, म पनि काठमाडौंवासी होइन । तपाईं पश्चिमतिरको वासिन्दा पर्नुभयो । म पूर्वको परें ।” पार्वतीले हा“स्दै भनिन्, “मेरो घर सर्लाही जिल्लाको ढुंग्रेखोला हो । तपाईंको घरमा को को हुनुहुन्छ ?”
“मेरो घरमा को को हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुको अर्थ परिवार संख्या हो भने अहिले म एक्लै छु घरमा बुबा र भाइ हुनुहुन्छ । अहिले उहा“हरू कहा“ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन । यसको कारण चाहिं नसोध्नुहोला । समग्रमा भत्रे हो भने म एक्लो जीवन बिताइरहेको छु ।” विक्रमले खुलेर आफ्नो कुरा राख्दै पार्वतीस“ग सोध्यो, “तपाईं यहा“ कोस“ग बसिरहनु भएको छ ?”
“मेरो त घरमा आमाबुबा, दाइ–भाउजू, भाइ–बहिनी सबैजना हुनुहुन्छ । अहिले सतुंगलमा दिदी भिनाजुस“ग बसिरहेकी छु । पोहोर साल दिदी सुत्केरी हु“दा स्याहार्न आएकी थिए“ । त्यसपछि गाउ“ फर्कन मन लागेन । आमाबाबु भने गाउ“ फर्कन कर गर्दै हुनुहुन्छ । यहा“ काम गरेर बसू“ भनेर कामको खोजी गर्दै हिंडेकी, खोई यहा“ काम पाउनै गाह्रो रहेछ ।”
“अहिलेसम्म कति ठाउ“मा काम खोजीसक्नुभयो ?”
“कति ! कति !! सर्वप्रथम ब्यूटीपार्लरमा काम सिकू“ भनेर गएको त एक महिना पछि आफ्नै देह व्यापार गर्न प्रोत्साहन दिन थाल्यो । त्यसपछि त्यहा“ गइन । एउटा नाम चलेको रेष्टुरा“मा तालिम लिएर वेटे«शको काम गर्न गएको थिए“ । त्यहा“ पनि अस्मिता बन्धक राख्नुपर्ने रहेछ । मलाई शरीर बन्धक राखेर पैसा कमाउने मन छैन । यस्तो सेल्सगर्लको काम पाए राम्रो हुन्छ भनेर निवेदन दिएर हिंडेको कहीं काम पाएन । मैले काम खोजेको यो पा“चौं ठाउ“ हो । कति दुःख गरेर पैसा जम्मा गर्छु निवेदन दस्तुर बुझाउन मात्र ठीक । कहीं कहिल्यै छानिन । मलाई त यी कम्पनीहरूले यस्तो वर्गीकृत विज्ञापन निकालेर हामीजस्ता बेरोजगारहरूलाई ठगीरहेको जस्तो लाग्छ । अब हेर्नोस् यहा“ तलब तोकेको छैन तैपनि दुई सय जनाभन्दा बढीले निवेदन दिएका छन् । जनही दुई सय रुपैया“ले दुई सय जनाको मात्र पनि चालीस हजार रुपैया“ भयो । जहा“ पन्ध्र सोह्र हजार रुपैया“ तलब तोकेको हुन्छ त्यहा“ त हजार पन्ध्र सय जनाले फाराम भर्छन् । यहा“ के हुने होला ?”
“यदि यस भवनको प्रत्येक कोठामा राखिएको सामानहरू यस कम्पनीको हो भने यो ठग कम्पनी होइन ।”
“विक्रम चौधरी” उनीहरू कुरा गरिरहेकै बेला गेट किपरले बोलायो ।
विक्रम ढोकामा गयो । गेट किपरले ढोका खोली दियो । ऊ भित्र पस्यो । ढोकाको सामुत्रे काठको एउटा आधुनिक ठूलो टेबुल राखिएको थियो । टेबुलमाथि एउटा ल्यापटप राखिएको थियो । टेबुलको छेउमा प्रदीपमान म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर लेखिएको तीनकुने काठको टुक्रा राखिएको थियो । निवेदन फारामको ठेली पनि त्यही टेबुलमाथि नै थियो । टेबुलको बाया“तिर एउटा सोकेस थियो । जहा“ बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित विभित्र सामानहरू सजाएर राखेका थिए । टेबुलनिरको घुम्ने मेचमा एकजना टाई सुट लगाएको युवक बसिरहेको थियो । सायद प्रदीपमान उही होला । उनको बाया“तिर एकजना अधवैसे मानिस बसिरहेको थियो ।
“नमस्कार” नजिक पुगेपछि विक्रमले दशऔंला जोडेर दुवैजनालाई पालैपालो नमस्कार ग¥यो ।
“तपाईंको नाम के हो ?” प्रदीपमानले उस“ग आ“खा जुधाएर सोध्यो ।
“विक्रम चौधरी” उसले शान्त शिष्ट स्वरमा निश्चिंत भएर जवाफ दियो ।
“म जन्मेको, हुर्केको ठाउ“ त नवलपरासी जिल्लाको बेतहानी गाउ“ हो । तर अहिले कीर्तिपुरमा डेरा लिएर बसेको छु ।”
“यदि मैले तपाईंलाई काम दिए“ भने कति तलब लिनुहुन्छ ?”
“मलाई काम चाहिएको छ । मेरो काम हेरेर तलब दिनुहोला ।”
प्रदीपमानले विक्रमलाई तलदेखि माथिसम्म र माथिदेखि तलसम्म नियालेर हे¥यो । फेरि विक्रमको मुहारमा हे¥यो । विक्रमलाई के गरू“, के भनू“ भयो । तैपनि उसले धैर्यतापूर्वक प्रदीपको जवाफको प्रतीक्षा गरिरह्यो ।
“हेर्नोस्, हामीले तपाईंहरूलाई काम दिने भनेको हाम्रो सामान पसल–पसलमा पु¥याएर बढीभन्दा बढी सामान विक्री गर्नु हो ।”
“गाडी कसले व्यवस्था गर्ने ? कति तलब दिनुहुन्छ ?”
“गाडीको व्यवस्था हामी गरिदिन्छौं । प्रतिमहिना दश हजार रुपैया“ तलव दिन्छौं । जति सामान बिक्री गर्नुहुन्छ त्यसको एक प्रतिशत कमिशन दिन्छौं । तर त्यसको लागि तपाईंले बैंक ग्यारेन्टी या धितो जमानी दिनुपर्छ ।”
“किन ?” विक्रमले उत्सुक भएर सोध्यो ।
“किनभने हामी तपाईंलाई लाखौं रुपैया“को सामान उधारोमा दिन्छौं । तपाईंले त्यो सामान बेचेर पैसा लिएर भाग्नुभयो भने के गर्ने ?”
“ममाथि विश्वास गर्नुहोस् । म इमान्दारीताका साथ काम गर्नेछु । एक पैसा गोलमाल गर्दिन ।”
“हेर भाइ ! यो व्यापार हो । व्यापारमा दया माया र भावनाले काम चल्दैन । को कति इमान्दार छ कसैको निधारमा लेखी राखेको हु“दैन । त्यो त काम गर्दै गए पछि थाहा हुन्छ ।”
उसको कुरा सुनेर विक्रम ट्वाल्ल प¥यो । उसलाई के भनू“, के भनू“ भयो । उसको लागि कसले जमानत राखिदिन्छ ? उसको यहा“ को छ र ? उसले घरपतिबा सूर्यमानलाई सम्झ्यो । सूर्यमानले उसलाई सकेको मद्दत गर्छु भनेको छ । उसको त्यत्रो घर जग्गा छ । गाडी छ । उसले चाहेमा जे धितो राख्नु परे पनि कुनै समस्या हु“दैन ।
यही सोचेर विक्रमले भन्यो, “म अर्काको घरमा डेरा गरी बस्ने मानिसले के सम्पत्ति ग्यारेन्टी दिन सकूला ? तैपनि व्यक्ति जमानीको लागि मेरो घरपतिबास“ग कुरा गरेर हेर्छु । उहा“ले मात्रु भयो भने कहिले आउ“ ?”
“अर्को हप्ता आजकै दिन आउनु । म तपाईंको बाटो हेरिरहन्छु ।”
“हुन्छ सर” भनेर विक्रम बाहिर निस्कियो ।
कोठा बाहिर पार्वती उसलाई पर्खिरहेकी थिइन् । उसलाई देख्ने बित्तिक्कै सोधिन्, “के भयो दाइ ?”
विक्रमले जवाफ दिनु अगाडि नै पालेले ‘पार्वती ढकाल’ भनेर बोलायो ।
“दाइ एकछिन पर्खनु होला । म भित्र गएर आउ“छु ।” विक्रमलाई यति भनी उसको जवाफको प्रतीक्षा नै नगरी पार्वती कोठाभित्र गइन् ।
घर जान लागेको विक्रमको पाइला टक्क रोकियो । उसलाई त्यहा“बाट बाहिर जाऊ“ कि नजाउ“m भयो । उसले केही निर्णय गर्न सकेन । उसको पाइला अगाडि बढेन । ऊ बरण्डातिर गयो । उसले बाहिर हे¥यो । अहिले फेरि पानी पर्न सुरू भएको छ । अघि पानी थामेर घाम पनि लागिसकेको थियो । यो असार–श्रावण महिना भनेकै वर्षातको महिना हो । ऊ आपूmदेखि आफै छक्क प¥यो । पार्वतीले एकछिन रोक्नुस् दाइ भत्रे बित्तिक्कै उसको पाइला किन रोकियो ? पार्वती उसको को हो ? कति दिनदेखिको चिनजान हो र ?
करिव दश मिनेट पछि पार्वती कोठाबाट निस्किइन् । उनले विक्रमलाई खोजिन् । विक्रम बरण्डामा देखेपछि पार्वती उतैतिर लागिन् ।
“के भयो ?” विक्रमले उत्सुकतासाथ सोध्यो ।
“के हुने नि दाइ ! हामी बाहिर जिल्लाका मानिसहरूले काठमाडौंमा जागिर पाउन गाह्रै रहेछ ।”
“किन निराश भएकी ? के भयो भन न !”
“यहा“ नोकरी पाउनको लागि धन जमानी या व्यक्ति जमानी चाहिन्छ रे । यहा“ मेरो त आफ्नो मान्छे कोही छैन । भिनाजु एकजना हुनुहुन्छ । उहा“ पनि ठूलो मान्छे होइन । एकजना फ्याक्टरी मजदुरको व्यक्तिगत जमानी के मान्ला ? तपाईको के भयो ?”
“मलाई पनि त्यस्तै भनेको छ । यदि कोही जमानी बसीदिने मान्छे भए अर्को हप्ता आजकै दिन आउनु भनेको छ ।”
“कसलाई जमानी राख्नु हुन्छ ? जमानी बसीदिने मान्छे छ ?”
“घरपतिबास“ग कुरा गरेर हेर्छु । उहा“ले मात्रु भयो भने अर्को हप्ता आउ“ला नभए अर्कै काम खोजू“ला ।”
“म त अब गाउ नफर्की नहुने भयो । यहीं काम गरेर बस्ने मेरो सपना पुरा नहुने भयो ।” पार्वतीले लामो सुस्केरा हालेर निराश भावमा भनिन् ।
“किन निराश हुनुभएको ? एक हप्ता पर्खनोस् । मेरो घरपति बाले जमानी बसीदिन्छु भत्रुभयो भने हामी मिलेर काम गरू“ला ।” विक्रमले प्याच्च भन्यो ।
विक्रमको कुरा सुनेर पार्वती छक्क परिन् । आज पहिलो दिन प्रथम पटक भेट भएको, एकचोटि कुराकानी हु“दैमा यति नजिक भएको छ । एक हप्ता पर्खिन भन्दैछ । विक्रमको कुरा उनलाई सपना हो कि विपनाजस्तो लागिरहेको छ । उनको निराश भइसकेको मनमा आशाको किरण ल्याई दियो । उनले शंका निवारण गर्न सोधिन्, “घरपति बाले जमानी दिनुहुन्छ भत्रे तपाईलाई पक्का विश्वास छ ?”
“शत प्रतिशत त होइन । नब्बे प्रतिशत विश्वास छ । मलाई तपाईंको सम्पर्क नम्बर दिनोस् ।”
“सम्पर्क नम्बर किन ? मेरो आफ्नै मोबाईल छ नि । खोई तपाईंको मोबाईल दिनोस् ।” भन्दै पार्वतीले विक्रमको मोबाईल लिएर आफ्नो नम्बर डायल गरिन् । आफ्नो मोबाईल बजेपछि उनले कट गर्दै भनिन्, “ल अब नम्बर सेभ गर्नोस् ।”
Posted by Jwojalapaweekly@gmail.com at 3:25 PM